Ahoana ny fomba firaketana ny fandefasana amin'ny Twitter? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 746
Ny mpampiasa Twitter dia manana fotoana hiraketana a Streaming mivantana miaraka amin'ny Hardware na Software; Noho io antony io dia tsy maintsy arahin'ity fomba ity ianao: Voalohany, mandehana amin'ny fanamboarana ny rindranasao na ny Hardware.
Indray mandeha amin'ny fampiharana azy ireo, ny mpampiasa dia manohy ny fomba manaraka: Safidio Server mpizara natao manokana; safidio ny Twitter amin'ny safidy dropdown hanamarinana io encoder io amin'ny kaonty Twitter anao.
Midira ao amin'ny kaontinao Twitter miaraka amin'ny Anaran'ny mpampiasa ary ny teny miafin'ny kaonty izay tianao handefasana ny Fampitana sy hanaiky ny alalana. Manaraka izany dia manomboka mandefa ilay horonantsary ao amin'ny tambajotra sosialy Twitter izy.
Mizarà mivantana na mamerina amin'ny laoniny Twitter
Para Mizarà renirano iray Live na Famerenana amin'ny laoniny ao amin'ny Twitter, ny mpampiasa dia tsy maintsy manaraka ny torolàlana sy ny fomba fanao hita eo amin'ny sehatra Twitter hanatanterahana izany hetsika izany; Amin'io lafiny io dia tsy maintsy:
Tsindrio ny sary famantarana Hizara hita ao amin'ny maody efijery feno Horonan-tsary mivantana na famerenana; avy eo safidio ny iray amin'ireto safidy ireto: kitiho ny Live Share (rehefa Live izany).
O Mizarà hatramin'ny voalohany (rehefa mampiasa mode Repeat); tsindrio eo Mizarà avy amin'ny handefa bitsika, alefaso amin'ny alàlan'ny hafatra mivantana na alaivo ny rohy misy ny horonan-tsary mivantana na famerenana amin'ny fotoana fohy izay safidin'ny Mpampiasa amin'ny alàlan'ny tsipika fisafidianana.
TOROHEVITRA OLONA AMIN'NY Fijerena sy ny fanehoan-kevitra amin'ny horonantsariko mivantana amin'ny TWITTER
Ny mpampiasa dia manana alàlana hisorohana olona Jereo sy omeo hevitra ny horonan-tsarinao Mivantana ao amin'ny Twitter; ny iray amin'ireo fomba dia ny fanakanana an'io olona io tsy hanao na inona na inona mihitsy amin'ny Live Video anao.
Mba hanakanana ilay olona, ​​ny mpampiasa dia tsy maintsy: Tsindrio Ny hevitrao, safidio ny Profileo, tsindrio ny Gear, fidio ny mpampiasa block. Tsy afaka hifandray amin'ny horonan-tsary mivantana anao intsony ny kaonty olona iray hafa ary hosakanana ao amin'ny Twitter.
Ny Mpampiasa amin'ny maha mpijery azy dia afaka mitaterà hevitra izay heverinao fa manafintohina sy manararaotra. Mba hanaovana izany, safidio ny hevitra ary kitiho ny tatitra momba ny Report. Amin'ity hetsika ity dia tsy hahita ny hafatry ny olon-kafa intsony ianao amin'ny sisa amin'ny Stream mivantana.
Ny atiny tsy avela amin'ny horonantsary mivantana
Ny lalàna sy ny politikan'ny Twitter dia mametraka ny atiny tsy avela amin'ny horonantsary mivantana, toy ny: Lahatsary misy herisetra an-tsary, atiny lehibe na sary mankahala izay manitsakitsaka ny fandriampahalemana sy ny fiadanan'ireo mpampiasa sy ny besinimaro.
Izay horonantsary mivantana navoaka tamin'ny fikasana mandrisika ny fankahalana eo amin'ny olombelona noho ny antony foko, fivavahana, kilemaina, fironana ara-pananahana, fiaviana ara-poko, zom-pirenena, sns.
Twitter dia manana fandeferana aotra miaraka amin'ny horonantsary mivantana na famoahana hafa izay mampiseho atiny sy sary izay misy fanararaotana ankizy, tanora ary tanora; sy ny biby voaolana, voaolana.
1 Mizarà mivantana na mamerina amin'ny laoniny Twitter
2 TOROHEVITRA OLONA AMIN'NY Fijerena sy ny fanehoan-kevitra amin'ny horonantsariko mivantana amin'ny TWITTER
3 Ny atiny tsy avela amin'ny horonantsary mivantana